​हाँस्दामात्रै होइन रुँदा पनि स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ ! कसरी ?
Thursday, 23 Aug, 2018 3:53 PM
हाँस्नु हाम्रो स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यो कुरा त धेरैले थाहा पाएकै छन् । तर के तपाईँलाई थाहा छ ? हाँस्नुजस्तै रुनु पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ भनेर । जानौं रुँदा स्वास्थ्यका लागि के फाइदा हुन्छ ।
हाम्रो अगाडि कोही मान्छे रुन थाल्यो भने उसलाई नरुन भन्छौं । रुन रोक्छौं । हालै गरिएको एक अध्ययनले के खुलासा गरेको छ भने हाम्रो शरीरबाट पिसाव र पसिना निस्कदा जसरी शरीरलाई काम नलाग्ने विषाक्त पदार्थ बाहिर निस्कने गर्दछ । ठीक त्यसरी नै आँशु झर्दा पनि विषाक्त पदार्थ निस्कन्छ । त्यसैले कोही तपाईंको सामु रोइरहेको छ भने उसलाई तुरुन्त रुन नरोक्नुहोस् । रोएर हल्का हुन दिउँ ।
आँखाभित्र हुने मेमब्रेन सुख्खा भयो भने त्यसको सीधा असर आँखाको ज्योतीमा पर्छ । तर,आँशुले मेमब्रेनलाई हमेशा सुख्खा हुनबाट बचाउँछ । मेमब्रेन सही हुनु भनेको हाम्रो आँखाको ज्याती लामो समयसम्म ठीक हुनु हो । त्यसैले पनि रुनु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
कुनै दुःख परेर आँशु झर्नु र आँखामा चोटपटक लागेर आँशु आउनु फरक कुरा हो । जब साँच्चिकै दुःख परेर मान्छे रुन्छ तब शरीरबाट ‘ड्रेकोनार्टिकोट्रोपिक’ र ‘ल्यूसीन’ नामक ‘स्ट्रेस हार्मोन’ बाहिर निस्कन्छ । आँखामा असहज भएर आँशु निस्कँदा यो प्रक्रिया हुँदैन ।
हाम्रो आँखामा एक ‘आइसोजाइम’ नामक तत्व हुन्छ । जसले बाहिरको ब्याक्टेरियासँग लड्न मद्यत गर्दछ । यसले आँखामा इनफेक्सन हुनबाट रोक्छ, साथै आँखालाई स्वस्थ्य राख्न पनि सहयोग गर्दछ । जब हामी रुन्छौं त्यतिबेला आँखाबाट ‘लाइसोजाइम’ निस्कन्छ ।